असार २९ मा ३ को प्रतिस्पर्धा, कसलाई फाप्ला ‘ब’ ? « Ramailo छ
असार २९ मा ३ को प्रतिस्पर्धा, कसलाई फाप्ला ‘ब’ ?
यो असार २९ गते तीन नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनमा आउँदैछन् । तीन फिल्मले व्यापार कस्तो गर्लान् ? त्यो रिलिज पछि थाहा हुनेछ । तर सँगै लाग्ने यी तीन नेपाली फिल्मबिच रमाईलो संयोग जोडिएको छ ।
असारको अन्तिम शुक्रबार रिलिज हुने नेपाली फिल्मको नाम एउटै अक्षरबाट सुरु भएका छन् । ‘बिरंगना’, ‘बाबु कान्छा’ र ‘बोबी’ को अगाडी साझा शब्द ‘ब’ छन् । एकै दिन रिलिज हुने फिल्मको यस्तो संयोग पर्नुलाई रमाईलो तबरले हेरिएको छ । अगाडीको अक्षर एउटै भएतापनि फिल्मको विषय र प्रस्तुती भने भिन्न भिन्न छन् ।
शिल्पा पोखरेल स्टारर ‘बिरंगना’ एक्सन लभ स्टोरी फिल्म हो भने सलोन बस्नेतको ‘बाबु कान्छा’ युवा लभ स्टोरीमा आधारित छ । यस्तै बोबी कविता गुरुंग र उमेश थापाको वास्तविक प्रेम कथामा आधारित छ । ‘बिरंगना’, ‘बाबु कान्छा’ र ‘बोबी’ मध्ये दर्शकको साथ कुन फिल्मलाई देलान् त ?